11 / 05 / 2017 20 / 06 / 2017 ရော့ Paton 1623 Views စာ0မှတ်ချက် ပြန်., Bossk ပါ, Bounty မုဆိုး, Dengar, IG-88, Star Wars, အင်ပါယာဒဏ်ခတ်
အကြောင်းပြချက်လေးခုရှိသည်။ ဒီမှာငါရေးသည်နှင့်မတူသည်၊ သင် ၀ ယ်မည်ကိုသင်ဝယ်ကောင်းဝယ်လိမ့်မည် Lego Star Wars 75167 Bounty Hunter Speeder စက်ဘီးတိုက်ပွဲ Pack ကို set
စျေးနှုန်း: £ 11.99 / $ 14.99 / € 17.99 (DE) အပိုင်းပိုင်း: 122 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
အကြောင်းပြချက် # 1 - 4-LOM
75167 ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော 4-LOM ၏ပွဲ ဦး ထွက်ကိုမြင်တွေ့ရသည်။ The Empire Strikes Back သည်သူ၏ပရိုတိုကောလေ့ကျင့်ရေးကိုကျော်ဖြတ်ကာ Bounty Hunter ဖြစ်လာရန်ကြိုးစားသည်။ ဒီပုံမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းစောင့်ဆိုင်းရကျိုးနပ်ပါတယ်။ ဒီပေါင် ၁၁.၉၉ သတ်မှတ်ချက်မှာ 11.99- LOM ၏စက်ရုပ်အင်္ဂါရပ်များကိုတိကျစွာဖမ်းယူနိုင်သည့်လက်ရာအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။art မျက်စိပေါ်တွင် Two- သေံပုံနှိပ်ရန်။ torso သည်အသေးစိတ်ကျစွာဖော်ပြထားသော်လည်း ၇၅၇၉၉ Shadow Troopers မှ Shadow Troopers နှင့်တူညီသောသတ္တုမီးခိုးရောင်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ခြင်းခံရမည်ဟူသောသတင်းများရှိသည်။
အကြောင်းပြချက် #2- သူဌေးက
၎င်းသည် ၁၀၂၂၁ Super Star Destroyer နှင့် 10221 Slave I တို့တွင်သာရရှိနိုင်သည့်အလွန်ကောင်းမွန်သော Bossk အသေးစားပုံစံအတွက်အရောင်အသစ်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအခွင့်အလမ်းများမှာဤသည်မှာလူအများစုအတွက်ပထမဆုံးသောအခွင့်အရေးဖြစ်သည် Lego သင့်လျော်သောပုံစံ။ သူ၏ ဦး ခေါင်းနှင့်လက်များကိုပိုမိုတိကျမှန်ကန်သော Olive အစိမ်းရောင်ရှိထားပြီးသူ၏ကိုယ်ထည်နှင့်ခြေထောက်များကို Cool Yellow ၌ဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးဒုတိယတစ်ခုကိုလည်းပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ မျက်စိတစ်ခုအီးပေးထားပြီxtra အရောင်ပေါ် မူတည်၍ လိမ္မော်ရောင်အနက်ရောင်မျက်လုံးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရသာပေါ် မူတည်၍ ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဒီအသေးစားရုပ်ပုံ၏အဓိကကန့်သတ်ချက်မှာသူသည်သေးငယ်သောရုပ်ပုံအဖြစ်တည်ရှိခြင်းဖြစ်သည်၊ နှင့်အဘို့အဖြေတစ်ခုအတူတက်လာ.
အကြောင်းပြချက် #3- IG-88
Bossk နည်းတူ IG-88 သည်အစုလိုက်အပြုံလိုက် ၁၀၂၂၁ Super Star Destroyer နှင့်အစောပိုင်း Slave I ၆၂၀ တွင်သာထင်ရှားခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အထူးပုံနှိပ်ထားသော 10221 × 6209 rounded အုတ်များရှိသည်။ ၎င်းသည်ဒီဇိုင်းတစ်ခုလုံးဖြစ်သည်။ မဟုတ်ရင် 1 ဗားရှင်းကတည်းကအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်မထားဘူး။
အကြောင်းပြချက် #4- Dengar
ငါဒီမှာငါလိုချင်တာကိုရေးလို့ရတယ်စတုတ္ထနဲ့နောက်ဆုံးအကြောင်းပြချက် ၇၅၁၆၇ ကိုမျက်မမြင်တွေဝယ်နေတုန်းပဲ။ စတုတ္ထနဲ့နောက်ဆုံးအသေးငယ်ဆုံးပုံပဲ။ နောက်ဆုံးနှင့်အနည်းဆုံး, ဒီထဲမှာရရှိနိုင်ပါကအတူတူပင်ဗားရှင်းဖြစ်သကဲ့သို့ 75145 နေကြတ်တိုက်လေယာဉ်, သောမကြာခဏယခုအချိန်တွင်လျှော့ချသောအစုတခုဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်ဇာတ်ကောင်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးအကြားခြားနားချက်တစ်ခုမှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ ယေဘုယျအားဖြင့်စစ်ပွဲအထုပ်များ၌သိသာထင်ရှားသောအရာဖြစ်သည်။articular အစုံ - mini ကိုလုံးသေနတ်သမား။ အရွယ်အစားကြီး။ အငယ်တန်းစားသည့်အခါ၎င်းတို့သည်ကိုင်ထားသည့်အသေးအဖွဲများ၏လက်၌မသက်မသာထိုင်ကြသည်။ ဘာလို့ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်ရတာလဲart ဇာတ်ကောင်ဒီဇိုင်းများသည်အုတ်ပုံစံဖြင့် Bossk ဘေးဖယ်ထား။ ၊ သူတို့၏အကြီးအကဲများကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်စွာနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်ကြီးမားသောပြွန်ကိုသွယ်တန်းရန်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ IG-88 သည်ရိုင်ဖယ်သေနတ်တစ်လက်နှင့်အတူပါ ၀ င်သည်။
အသေးအဖွဲများနှင့်ကြီးမားသောပေါက်ကွဲမှုများဘေးဖယ်အချို့လည်းရှိပါတယ် Lego ဒါကလာပါတယ် 75167 Bounty Hunter Speeder စက်ဘီးတိုက်ပွဲ Pack ကိုဒီ Azure အပြာရောင် -tinted စက်စက်ဘီး၏ပုံစံ၌တည်၏။ ၎င်းသည်အလွန်ကြီးမားသော်လည်းဒီဇိုင်းဆွဲသူအနေဖြင့်အုတ်များဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောမြန်နှုန်းမြင့်စက်များနှင့်အသစ်စက်စက်များမရှိသောဂလက်ဆီတွင်ထူးခြားသည့်ပုံစံကိုဖန်တီးသည့်အတွက်ဂုဏ်ယူသည်။ သို့သော်ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုအတွက်ဤစက်ဘီးကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအစုံ၏နောက်ထပ်မိတ္တူများကို ၀ ယ်ယူခြင်းအဆုံးသတ်နိုင်သည်။
စစ်ပွဲအထုပ်တစ်ခု၏ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကိုနိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ပြောစရာများစွာမရှိပါ။ ဒီပစ္စည်းအစုံကို ၀ ယ်ပြီး ၀ ယ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသေးစားဓာတ်ပုံရွေးချယ်မှုကကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲဆောင်တယ်။ ပိုက်ဆံအတွက်မင်းမှာမင်းမရှိသေးတဲ့ဆုလေးဆုလေးရတယ်။ အဆိုပါအသေးစားလုံးသေနတ်သမားဖို့ရှိပါတယ် 75167 Bounty Hunter Speeder စက်ဘီးတိုက်ပွဲ Pack ကိုဒီဟာကမကောင်းဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကိုမ ၀ ယ်နိုင်လောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိပါဘူး။ အကြောင်းပြချက်လေးခုကမင်းကိုဆွဲဆောင်တယ်။
75167 Bounty Hunter Speeder Bike Battle Pack ကိုဇွန် ၁ ရက်မှစတင်ရရှိနိုင်ပါသည် shop.LEGO.com။ သင်ကူညီနိုင်သည် Brick Fanaticsငါတို့သုံးပြီး '' အလုပ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← LEGO World of Creativity Tour ကို US ရောက်မည်
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: Tony Hawk Pro Skater →